Shaqaale la'aan ka taagan xaruumaha caafimaadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqaale la'aan ka taagan xaruumaha caafimaadka
La daabacay onsdag 13 juni 2012 kl 13.11
La'aanta shaqaalo badala kuwo faxasa qaadanaya xagaagaan ee ka taagan xaruumaha caafimaadka ayaa keeni karta in ay kororto dayrta soo socota jiro isku-qorida dadyow badan oo ka howl-gala xaruumaha caafimaadka. Waxaa tusaale hada caadi ka ah xaruumaha caafimaadka in ay shaqaalohooda siiyaan guno-dheerad ah hadii aysan qaadan fasaxooda. Taas oo keynaysa in ay kuwo badan aad u daalaan dayrta, ayuu yeri madaxa shaqaalala hosbitaalka Örnsköldsviks Lars Mähler.
- Arintaan nidaamka gunooyinka dheeradka ah waxay keentay saameyn aan haboonayn iyo in shaqaaluho dib u dhigaan fasaxooda xili danbe, taas oo keentay in qofku xagaaga oo dhan shaqeeyo xiliga dayrtana ahaado mid aad u daalan. Anagu xataa waan aragnay in ay korortay jiro isku-qoritaanka, arintaan derteed, ayuu yeri Lars Mähler.
Lakiin inkastoo arintaan dhalisay jiro isku-qoritaan badan hadana baaritaan uu sameeyey ururka shaqaalaha ka howl-gala xaruumaha caafimaadka vårdförbundet ayaa muujinaya 12 kamid ah 17 gobal ee su'aalaha baaritaanka ka jawaabay ayaa sheegay in ay isticmaalaan nidaamka gunooyinka dheeradka ah ayna siiyaan shaqaalahooda lacag gaarta 12000 oo koron asbuuci hadii ay dib u dhigaan fasaxooda Sommarka.